laacibfm.com » LA YAAB: Odion Ighalo Oo Mushahar 400 Kun Ginni Isbuucii Ah Loo Soo Bandhigay Si Uu Isaga Diido Heshiiska Joogtada Ah Ee Manchester United
LA YAAB: Odion Ighalo Oo Mushahar 400 Kun Ginni Isbuucii Ah Loo Soo Bandhigay Si Uu Isaga Diido Heshiiska Joogtada Ah Ee Manchester United
Weeraryahanka amaahda ku jooga Manchester United Odion Ighalo ayaa loo soo bandhigay qandaraas kordhin labo sannadood ah oo uu isbuucii ku qaadanayo 400 kun ginni, isagoo dalabka ka helay kooxda milkiyadiisa leh ee Shanghai Shenhua.
Kooxda Shiinaha ayaa dooneysa inay ku abaalmariso weeraryahanka reer Nigeria qaab ciyaareedkiisa fiican ee United isagoo dhaliyay afar gool seddexdii kulan ee ugu horeysay ee uu ku soo bilowday.
30 jirkaan ayaa amaahda uu ku joogo England waxay dhaceysaa 31ka bisha May laakiin Sky Sports ayaa sheegtay in heshiiskiisa amaahda la gaarsiin doono ilaa iyo 30ka Juun madaama uu Coronavirus hakad geliyay xilli ciyaareedka.
Qandaraaska uu Ighalo haatan kula jiro kooxda Shanghai waxa uu dhacayaa December 2022, laakiin kooxda Shiinaha ayaa dooneysa inay heystaan ilaa iyo December 2024.
Heshiiska cusub ayaa ah mid uu ku qaadan doono 400 kun ginni isbuucii ka hor canshuurto, waana lacag soo jiidaneysa weeraryahanka.
Laakiin waxa uu haatan diirada saarayaa Man United ilaa iyo uu ka dhacayo heshiiska amaahda. Waxa uu sugi doonaa haddii ay Man United heshiis joogta ah u soo bandhigeyso ka hor inta uusan go’aan kama danbeys ah ka gaarin mustaqbalkiisa.
Ighalo ayaa mar walba sheegayay in riyadiisa ay tahay inuu u dheelo United oo ah koox uu yaraantiisii taageeri jiray.